गोकुल बास्कोटाको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक गरेका मिश्रलाई हुने भयाे यस्ताे कडा कारबाही — Sanchar Kendra
गोकुल बास्कोटाको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक गरेका मिश्रलाई हुने भयाे यस्ताे कडा कारबाही
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाको अडियो रेकर्ड गरेका विजयप्रकाश मिश्रलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ । समितिले बिहीबार नेपाल प्रहरीको साइबर क्राइम ब्यूरोलाई पत्र लेखेर यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
लेखा समितिका सदस्यहरूको चरित्र हत्या गरेको भन्दै समितिले कारबाही गर्न पत्राचार गरेको हो । ‘एउटा अनलाइन मिडियामा दिएको अन्तर्वार्तामार्फत हाम्रो चरित्र हत्या गरेकाले मिश्रलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएका हौं’ समितिका सदस्य सूर्य पाठकले भने ।
यसअघि पौडेलले जर्मनी, फ्रान्स र स्वीजरल्याण्डका कम्पनीहरुमा उच्चस्तरीय भ्रमण गरेर प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिएका थिए । कसको खर्चमा भ्रमणमा गएको भन्ने सांसदहरुको प्रश्नमा पौडेलले पौडेलले जर्मनीको भ्रमण खर्च नेपाल सरकारले नै व्यहोरेको र फ्रान्स भ्रमणका लागि आफ्नो टिकट खर्च फ्रान्स सरकारले नै व्यहोरेको जानकारी दिएका थिए ।
त्यसपछि सांसदहरुले सरकारको प्रतिनिधि बनेर एक जना कर्मचारी विदेशी कम्पनीको खर्चमा भ्रमण गर्न जानु कत्तिको राम्रो हो भनेर नैतिक प्रश्न उठाएका थिए । कांग्रेस सांसद राजन केसीले भने, ‘कर्मचारी विदेशी कम्पनीको खर्चमा बिदेश जानु राम्रो होइन, उनीहरुको पासपोर्ट हेर्नुपर्छ र कति पटक, कहाँ, के प्रयोजनका लागि गएको हो भनेर छानबिन गर्नुपर्छ ।’
समाजवादी पार्टीका सांसद मोहम्मद इस्तियाक राईले सेक्युरिटी प्रेसको भवन निर्माणको लागत अस्वाभाविक रुपमा बढी राखिएको भन्दै प्रश्न गरेका थिए । पूर्वशहरी विकास मन्त्रीसमेत रहेका उनले लागत अनुमान वस्तुगत नभएको बताउँदै भने, ‘भवन निर्माणका लागि प्रतिवर्गमिटर ६ हजार खर्च आउँछ, तर ३४ हजार लागत राखिएको छ, किन ? कि ब’मले हान्दा पनि नफुट्ने भवन हो ?
नेकपाका सांसद अमनलाल मोदीले ढाँटेको कुरा काटे नि मिल्दैन भन्दै सेक्युरिटी प्रेस स्थापनाको काम तत्काल रोक्न माग गरे । समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले पनि ४९.२ मिलियन डलर भ्रष्टाचार हुन लागिएको भन्दै रोक्न माग गरे । उनले सेक्युरिटी प्रेस खरिद सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार पनि नभएको दाबी गरे ।
नेकपाका सांसद सूर्य पाठकले लेखा समितिका सदस्यहरुले समेत कमिसन खाएर सेक्युरिटी प्रेस खरिद गर्न लागिएको भनेर एक व्यक्तिले आफूहरुको चरित्र हत्या गरेको भन्दै आपत्ती जनाए । उनले समिति सभापति शाहको ध्यानाकर्षण गराउँदै सम्बन्धित व्यक्तिलाई समितिमा बोलाएर प्रष्टिकरण सोध्नुपर्ने बताए ।